Inkontileka kaHans Airways neAir Logistics Group
Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » Airlines » Inkontileka kaHans Airways neAir Logistics Group
AbakwaHans Airways balungiselela ukwethula izindiza zabo ezingamisi ngqo eziya eNdiya ngokuhamba kwesikhathi ngo-2021 futhi njengoba iqhubeka nomkhankaso wayo wokuthola isitifiketi se-UK Air Operator kusuka ku-Civil Aviation Authority.
AbakwaHans Airways baqoka i-Air Logistics Group njengeCargo General Sales and Service Agent yayo.
I-Air Logistics Group ibekwe kahle ukuba ibe ubuso beqembu lezimpahla zakwaHans Airways.
Isivumelwano sokuhlinzeka uHans Airways ngokuthengisa izimpahla ngokugcwele, ukumaketha, ukubhuka online nokuxhaswa kwamakhasimende kuyo yonke inethiwekhi.
Inkampani yebhanoyi yokuqala e-UK, UHans Izindiza iqoke i-Air Logistics Group njengenethiwekhi yayo yeCargo General Sales and Service Agent (GSSA) ebanzi. Isivumelwano esikhethekile se-GSSA sizoqala ukusebenza kusukela ngomhlaka 1 Agasti 2021, lapho umphakeli ozinze e-East Midlands enikeza iHans Airways ngokuthengisa izimpahla ngokugcwele, ukumaketha, ukubhuka online kanye nokwesekwa kwamakhasimende kuyo yonke inethiwekhi yayo. Lezi zindaba zilandela ngokushesha ngemuva kwesimemezelo sakamuva sezindiza sethimba laso elinamava kakhulu lamalungu eBhodi ekuqaleni kukaJulayi.
Isivumelwano esisha seGSSA sithuthukiswa ngesikhathi esifanele njengoba iHans Airways ilungiselela ukwethula izindiza zayo ezingapheli eziya eNdiya ngokuhamba kwesikhathi ngonyaka ka-2021 futhi njengoba iqhubeka nomkhankaso wayo wokuthola isitifiketi se-UK Air Operator ku-Civil Aviation Authority. Lesi sivumelwano kulindeleke ukuthi sihambise imali engenayo yezimpahla kulayini wezindiza, ikakhulukazi esikhathini lapho ukuthuthwa kwempahla emhlabeni kudlondlobele.
"Ku I-Air Logistics Group, siqinisekile ukuthi sikhethe umlingani ozokwazi ukuhlinzeka ngobuchwepheshe bokuthengisa, izikhathi zokuphendula ngokushesha kanye namazinga okusizakala nokuthi umphakathi wezimpahla uzolindela kwaHans Airways, ”kuphawula u-Ian Davies, oyiChief Operating Officer, uHans Airways. "Njengabasebenzi abanesipiliyoni kanye nenethiwekhi yokuhlinzeka ngemizila yethu ehleliwe ngempumelelo, i-Air Logistics Group isesimeni esikahle sokuba ngubuso beqembu lezimpahla zakwaHans Airways."
Isivumelwano ne-Air Logistics Group ngeke kube ukuphela kwenkontileka esayinwe yiHans Airways enomkhakha wezinsimbi ezisindayo emkhakheni wayo, njengoba umphathi ethwala ukusebenzisana namagama amaningi asembonini yezindiza. “Isu lethu lebhizinisi kusukela osukwini lokuqala kube ukusebenzisana nabaphakeli abahamba phambili emakethe nabalingani bethu, njenge-Air Logistics Group, okusivumela ukuthi sakhe izisekelo eziqinile futhi eziqinile ezidingekayo ukuze siphumelele. Kunezinye izivumelwano ezisephayiphini ezizokhombisa ukuthi iHans Airways isho ibhizinisi, ”kunezela uDavies.
"UHans Airways ubuso obusha obuthokozisayo embonini yezindiza futhi uzobe esebenza emzileni obalulekile wezohwebo phakathi kwe-UK neNdiya," kuchaza uStephen Dawkins, oyiChief Executive Officer kwa-Air Logistics Group. "Siyathemba ukuthi ukusebenza kwabo okusha kusuka e-UK kuya eNdiya kuyisiqalo nje, nokuthi ibhizinisi lebhola lezimpahla singalakha ngaphesheya kwenethiwekhi yeHans Airways njengoba ikhula."
zezindiza India Logistics Sales
Kushone abantu abangu-59, abangaphezu kuka-1000 baduka njengoba izikhukhula eziyinhlekelele zihlasela iJalimane
Izeluleko zakamuva zase-US, e-UK, ze-EU eMbusweni wase-Eswatini zinanelwa yi-African Tourism Board
Ukwelashwa Kokuqala Kokuguqula Izifo Kohlobo Lokuqala Lwesifo Sikashukela